Etu ị ga - esi họrọ ntụpọ ziri ezi maka akụkụ stampụ
Die mmepụta kwesịrị ịdabere na ntụmadị (pịa) inye ike, dị iche iche anwụ size, Ọdịdị ụdị mkpa ịhọrọ dị iche iche ntụmadị ka dakọtara. Ezi uche nhọrọ nke ntụmadị nwere ike belata na-eri na-azọpụta ego. A na-atụzi ụkpụrụ ọkọlọtọ nhọrọ nhọrọ ịnwụ site na tonnage, nke a na-enwetakarị ...
Nnukwu pịa emepụta n'ihi na ị na-enyocha ya ọrụ usoro
Large pịa Nsukka n'ihi na ị na-enyocha otú ka anyị ahịa ina ka mma zutere? Ọnọdụ ọnọdụ nke ihe ndọtị nke nnukwu akwụkwọ akụkọ nwere nkwenye, yana ọnọdụ ihu nwere ike ịmịcha nke ọma mgbe etinyere ihe ndozi ahụ. A nakweere usoro a maka suppo ...
Ise nkịtị mpempe akwụkwọ metal akpụ Filiks
Mpempe akwụkwọ mpempe akwụkwọ (nke na-abụkarị nchara ma ọ bụ aluminom) na-arụ ọrụ dị mkpa na iwu na ịmepụta. N'ime ụlọ ọrụ ihe owuwu, a na-eji ya dịka ụlọ na shei ma ọ bụ elu ụlọ; na n'ichepụta ụlọ ọrụ, mpempe akwụkwọ metal na-eji maka akpaaka akụkụ, oké ígwè, wdg Na n'ichepụta mpempe akwụkwọ metal akụkụ, m ...
Pịa nrụzi na ndozi
site ha na 21-01-07
Mmezi Mmezi Mechanical mechanic 1500-2000 awa mmezi Ule ma dozie mmepụta mmanụ na ọrụ nchọpụta nrụgide nke mmanu mmanu. Igwe sistemụ ikuku, ihe ndozi ndozi mmanụ na ọrụ ndị ọzọ na mmiri adịghị ọcha nyocha na nyocha dị mkpa. 3。 Air mgbali s ...
Ntuziaka maka igwe akụrụngwa
Mmepụta nchekwa N'ihi na ọkpọ ọkpọ nwere njirimara nke oke ọsọ na nrụgide dị elu, a ga-ahụrịrị ụfọdụ iwu nchekwa mgbe ị na-eji ọkpọ ọkpọ maka oghere na ịme. 1. A ghaghị itinye akụkụ nnyefe ndị ekpughere n'èzí pịa ka ha nwee mkpuchi mkpuchi. A machibidoro iwu d ...
Nhazi nke stampụ anwụ
Nkowa nkenke 1. Oke ịnwụ Ọkụ nke elu bụ ọkara elu nke anwụ dum, ya bụ, akụkụ ịnwụ arụnyere na mmịfe nke igwe akụkọ. 2. Oke ebu isi N'elu die isi bụ n'elu efere ekara akụkụ nke elu-anwụ, nke dị nso na pịa mmịfe na ofu na pịa mmịfe throug ...
Ngwa na nhazi ọkwa nke igwe obibi akwụkwọ
Ngwa na njirimara Punch bụ ebe a na-ejikarị elektrọnik, nkwukọrịta, kọmpụta, ngwa ụlọ, arịa ụlọ, njem, (ụgbọ ala, ọgba tum tum, igwe) akụkụ ngwaike na stampụ ndị ọzọ na akpụ. (1) akwa rigidity na nkenke nkenke nkenke di na welded na ígwè efere a ...
Punch pịa igwe na ya na-arụ ọrụ ụkpụrụ
Punch pịa na ụkpụrụ ọrụ ya Punch pịa, bụ stampụ pịa. Na mmepụta mba, usoro stampụ nwere uru nke ịchekwa ihe na ume, arụmọrụ dị elu, ihe nyocha dị ala maka onye ọrụ yana ịme ngwaahịa ndị na-agaghị enwe ike ịnweta site na ntanetị ...
Igwe Servo Press, 25t Press igwe, 300t Solid Frame Double Point Mechanical Punch Machine, 260t Servo Press igwe, 1200t Kwụ Ọtọ Single crank Punch Machine, 400t Solid Frame Single Point Mechanical Punch Machine,